Grunge Style Shirkada dharka gogolka ah - Dhaqdhaqaaqa
Xidho Wanaagsan Dharka Dufanka ah
$ 50.15 $ 59.00 Waxaad kaydisaa 15% ($ 8.85)
Maro-dhejisyo badan oo la jimicsado ayaa ah kuwa ugu wanaagsan marka ay timaaddo isku dhafka iyo isku-darka. Waxaa laga helaa naqshad madow iyo caddaan ah, dharka xiran ee raaxada leh ayaa la isugu duubi karaa lammaanaha aad jeceshahay ee kabaha canqowga, jaakad dileen iyo koofi si aan taxaddar lahayn muuqaal naxdin leh.
Meelaha ku habboon ee jilitaanka dharka ayaa sidoo kale aad ugu fiican fureyaasha, jeebka yar ama taleefanka kaliya haddii aadan rabin inaad keento boorso ama boorso. Qaado size ka weyn haddii aad raadinayso dhejis weyn oo dabacsan!
Waxaa laga heli karaa xayawaanka ilaa cabbirka dheeraadka ah, laga bilaabo S ilaa 5XL si loogu habeeyo dumarka dhamaantood.
Lebbiska dharka: Mid-Dibi